Coronavirus: “Waxaan ka baqayaa in aan baahi u dhinto Covid-19 kahor” |
Coronavirus: “Waxaan ka baqayaa in aan baahi u dhinto Covid-19 kahor”
“Waxaan maalintii heli jiray sideed doollar, qoyskeygana wuxuu ka kooban yahay shan qof oo aan aniga u shaqeeyo, waan ogahay khatarta fayraska corona balse ma daawan karo caruurteyda oo baahan,” ayuu yiri Ramesh.
Sidoo kale Maxamed Sabir, oo ah ganacsade leh dukaan yar oo lagu iibiyo caana-garoor oo ku yaala caasimadda Delhi, ayaa sheegay in dhawaan uu shaqaaleysiiyay laba qof, si uu uga faa’ideysto xilliyada xagaaga oo uu dhaqaale fiican u sameeyo.
“Hadda wax mushaar ah ma siin karo oo lacag uma hayo, qoyskeena waxaa ay dhaqaale ka heli jireen beeraha iyo dalagyada, balse dalagyadii way halaabeen sannadkan, waxayna iga sugayaan in aan aniga masruufo, waxaan dareemayaa in aysan jirin cid i caawineysa, waxaana ka cabsi qabaa in corona kahor an baahi u dhimano,” ayuu yiri Maxamed.
Malaayiin xoogsata ah oo ku nool dalka Hindiya ayay xaaladda ku xumaatay, kadib markii ra’iisul wasaraaha dalkaas, Narendra Modi uu talaadadii ku dawaaqay bandow habeen iyo maalin ah, waxaana dalkaas laga soo sheegay 500 oo kiis oo xanuunka corona, halka 10 qofna ay u dhinteen.
Dowladda uu hogaamiyo ra’iisul wasaare Narendra Modi iyo barasaabyada gobolo badan oo ku yaala dalkaas ayaa ballanqadaay in taageero dhaqaale siin doonaan dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay nolosha sii wataan inta lagu guda jiro marxaladdan.
Hey’adda shaqalaaha adduunka ee ILO ayaa sheegtay in boqolkiiba 90 dadka ka shaqeeya Hindiya ay yihiin kuwa ka shaqeysta shaqooyin hoose.
Intooda badan dadkaas ayay hey’addu sheegtay in aysan laheyn xuquuq sida lacagta la siiyo dadka hawlgabka ah, fasaxyada qofka marka uu xanuunsado iyo ceymis.
Xoghayaha guud Qaramada Midoobay ayaa ku tilmaamay fayraska Corona in uu yahay mid halis ku ah aadanaha, islamarkana ay tahay in bina’adamku dhammaan ay la dagaalamaan.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa dhankeeda sheegtay baahidda loo qabo in cudurkan baaritaankiisa iyo karantiilka dadka uu haleelo la sii xoojiyo.